China pp corrugated igbe maka awara awara Manufacturer na Supplier | Sihai
P corrugated mpempe akwụkwọ nwere ike iji na awara awara, kwesịrị, ọ bụ maka awara awara igbe, awara awara mbupu. Pp oghere mpempe akwụkwọ bụ ejima-mgbidi Ọdịdị, ọ bụ mgbanwe maka n'ogige atụrụ, na-ejima-mgbidi Ọdịdị bụ a zuru okè maka ichebe ngwaahịa na shiping.
P corrugated mpempe akwụkwọ nwere ike iji na awara awara, kwesịrị, ọ bụ maka awara awara igbe, awara awara mbupu. Pp oghere mpempe akwụkwọ bụ ejima-mgbidi Ọdịdị, ọ bụ mgbanwe maka n'ogige atụrụ, na-ejima-mgbidi Ọdịdị bụ a zuru okè maka ichebe ngwaahịa na shiping. P oghere mpempe akwụkwọ nwere ike ahaziri ọtụtụ iche iche nke ngwugwu igbe, plastic akpa maka awara awara, awara awara igbe nwekwara ike ịgbakwunye nkebi maka iche iche akpa na awara awara.
Mpempe akwụkwọ oghere pp pịpị dị mfe ịpịpịa, na-echekwa ohere, na-ewetara ndị ahịa ọmarịcha ahụmịhe ojiji. Mpempe oghere pp oghere a na-egosipụta igbe na-adịgide adịgide, nke nwere mmiri na-adịghị ike, mildewproof, fireproof, mgbochi static, mgbochi corrosion, mgbochi eyi, mgbochi UV, mgbochi vibration, mgbochi ala na ọrụ ndị ọzọ. Ọrụ ndị a na-ekwe nkwa iguzosi ike n'ezi ihe na ọrụ nke igbe ahụ ruo n'ókè dị ukwuu, ọ dị mma maka ichedo ngwaahịa ndị ahụ mgbe ha na-ebugharị ma na-ebugharị. P corrugated awara awara igbe nwere ike ahaziri ebipụta maka dị iche iche na ngwaahịa na logo, ejikari na ebipụta bụ silkscreen, ụfọdụ nwere ike mere UV ebipụta n'èzí-eji.
Nke gara aga: pp oghere ntuli aka oghere
Osote: p corrugated n'ala chebe mpempe akwụkwọ